Home » Setp2Fail Error »
Tuesday, April 29, 2014 Setp2Fail Error
ကျန်တော်တို့HUAWEI G520 (500) ဖုန်းများ Firmware တင်တဲ့အခါ Setp2Fail ပြတဲ့ သူငယ်ချင်းများ သူငယ်ချင်းများ Zip ဖိုင်ကိုဒေါင်းပြီး CWM ကနေ update.zip install လုပ်ပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် dload နဲ့ တင်လို.ရပါပြီခင်ဗျာ...
Credit to - Myo Ko Ko Zaw
Viber ဆော့ဝဲထဲက ၀ယ်ရမယ့် sticker လေးတွေကို Freedownload ရယူချင်သူတွေအတွက် တောင်းဆိုလာသူတွေများလွန်းလို့ရှာတွေ့တာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကဲ. … Viber ဆော့ဝဲထဲက.ဝယ်ခိုင်းတဲ Viber stickers လေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ၈ခုလား ဘယ်နှခုလဲ သိတော့ဘူး. သေချာတာတော့ ၇ခုကျော်တယ်.. ဟီးးး. . ဝယ်ရတဲ့ဟာတွေထဲက ကျန်ခဲ့တာ ရှိရင်. နာမည်ပြောပေးပါ. အနော် တင်ပေးပါ့မယ်.. . အနော်ကတော့ Storage/sdcard0/viber/media/.stickers: ထဲက မ , လာတဲ့ အတိုင်း နာမည်မပြောင်းထားဘဲ တင်ပေးလိုက်တယ်. . စုစုပေါင်းက 40.6MB ပါ.. http://www.mediafire.com/?znl3be26kez663o တစ်ခုချင်းဆီ ခွဲတင်ပေးပါ့မယ်.. မဒေါင်းခင်. Storage/sdcard0/viber/media/.stickers: ထဲ ဝင်ကြည့်ပြီး. ဖိုင်နာမည် တူ မတူ ကြည့်ဦးနော်. ဖရီးပေးထားတာနဲ့ ထပ်နေမှာ ဆိုးလို့ပါ.. http://www.mediafire.com/?6xa8dsb0go78zbl http://www.mediafire.com/?8lmrar3yseo8j1q http://www.mediafire.com/?1h17bw7nff81pb3 http://www.mediafire.com/?9n16a6lkhbtk1lb http://www.mediafire.com/?04s30mcy94o6h4e http://www.mediafire.com/?z6jfpyayov880v1 http://www.mediafire.com/?anx3et3u0qrfnh4 http://www.mediafire.com/?rre7fftwrcfufcj http://www.mediafire.com/?dp89a3egc8qg60c http://www.mediafire.com/download/dp89a3egc8qg60c/1200.zip အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
သင်ဒီကကူးလာတယ်နော် ဟဲ: http://androidlulin.blogspot.com/2014/04/viber-sticker-freedownload.html